के साँच्चै नै दलाई लामा र चीनको मिलन होला ? बिसौं शताब्दीको मध्यबाट सुरु भएको तिब्बती समस्या अहिले आएर समाधान होला त ? तिब्बती स्वतन्त्रताका पक्षधर चीनसँग मिलेर बस्लान् ? चीन, तिब्बत र अमेरिका लगायत पश्चिमाको त्रिकोणात्मक राजनीतिक खेलमा नेपाललाई के असर पर्ला ?
यी प्रश्नहरु नेपालमा तिब्बती शरणार्थी पसेको देखेका, खम्पा बिद्रोह भोगेका पुस्तादेखि पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दी भोगेका पुस्तासम्मको चासो र जिज्ञासाको बिषय हो ।
निर्वासित तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा र निर्वासित तिब्बती सरकारका गतिविधि सम्बन्धमा संचारमाध्यमहरुमा विश्वव्यापी रुपमा समाचारहरु त आइरहेकै थिए । एक दिन दलाई लामाको एउटा यस्तो भिडियो सार्वजनिक भयो जसले तिब्बत मामिलामा आधा शदीदेखि भइरहेको चलखेल र राजनीतिलाई नयाँ मोड दिएको छ ।
१२ सेप्टेम्बर २०१८ मा यूट्युबमा सार्वजनिक भएको सो भिडियोमा दलाई लामा आफ्ना अनुयायीहरुसँग तिब्बत स्वतन्त्रताको आन्दोलन सहज नभएको बताउदै आफ्नै जीवनकालमा चीनसँग मिलेर तिब्बतीहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्नेतर्फ स्पष्ट बोलेका छन । भारत स्थित धर्मशालामा खिचिएको भनिएको तीन मिनेट २४ सेकेन्ड लामो सो भिडियोमा उनी भन्छन्–
‘हाम्रो धर्म र संस्कृति बचाउनका चीन अन्तर्गत स्वायत्त तिब्बतमा रहनु अझ राम्रो हुन्छ । चीनको संबिधानमा केही स्वायत्त क्षेत्रहरुको ब्यवस्था छ । चीन अन्तर्गत तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा हाम्रा तीन प्रदेशमा हामीले हाम्रो धर्म र सस्कृतिको रक्षा गर्न सक्छौं ।’
पचास बर्ष लामो तिब्बती स्वतन्त्रता संघर्षको अन्त्य गर्नेतर्फ संकेत गर्दै धार्मिक नेता लामा थप्छन्– ‘यदि हामीले स्वतन्त्र तिब्बतमा रुची देखायौं भने हामी भिखारी हुन्छौ । तर, चीन सरकार अन्तर्गत रह्यौं भने हामीसँग लाखौं रुपैयाँ हुनेछ ।’
तिब्बती नेताहरु अमेरिकी र पश्चिमी पैसामा लोभिएको संकेत गर्दै उनी प्रश्न गर्छन्– ‘हाम्रा केही मान्छे पैसाका लागि अमेरिका र वेल्जियम गएका छन् । हामीलाई पैसा चाहिन्छ हैन त ? त्यसो हो भने हामी स्वायत्तता लिएर संयुक्त रुपमा चिनियाँ संघमा बसौं ।’
चीन सरकारले निकट भविष्यमै आफूलाई चीन बोलाउने संकेत गर्दै लामा भन्छन्– ‘एकदुई वर्षपछि हाम्रा लागि ठूलो परिवर्तन हुनेछ । पहिला मलाई चीन तिर्थयात्रा जाने इच्छा छ । त्यसपछि मेरो जन्म थलो र ल्हासा पालैपालो जाने ईच्छा छ ।’
विगत पचास बर्ष लामो संघर्षमा तिब्बती स्वतन्त्रताको आन्दोलनले निस्वार्थ साथ नपाएको तीतो यथार्थलाई लामा स्वीकार्छन । भारत, अमेरिका र युरोपले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ अनुकूल तिब्बतीहरुलाई प्रयोग गरेको निष्कर्षमा उनी पुगेका छन् । विश्वमा शक्तिशाली बन्दै गएको चीनसँग पौंठेजोरी खेलेर पार नलाग्ने कुरा दलाई लामाले स्वीकारेका छन् ।
उनी भन्छन– ‘हामीले सधैंभरी स्वतन्त्र तिब्बत भन्यौं, तर के वास्तवमै हामी स्वतन्त्र तिब्बतका लागि चीनमाथि विजय पाउन सक्छौं त ? मानिसहरु भन्छन– यो गर्न सकिँदैन ।’ यति भनिसकेर दलाई लामा हास्न थाल्छन् । तर, स्रोताका रुपमा रहेका अनुयायीहरु चाहिँ रुन थाल्छन् ।
उनीहरुलाई सम्झाउँदै स्वतन्त्रताको संघर्ष पार नलाग्ने तर्फ संकेत गर्दै दलाइ लामाले अगाडि भनेका छन्– ‘यदि तिमीहरुले चमत्कार देखाउन सक्छौ भने त्यो फरक हो । अर्कातिर भारत, अमेरिका लगायत सबै चीनको साथी भइसकेका छन् ।’
त्यसो त तिब्बती धार्मिक गुरु एवम् स्वतन्त्रता आन्दोलनका सर्वोच्च नेता दलाई लामाले विगत केही वर्षयता आफ्ना निकटहरु सँग तिब्बती स्वतन्त्रताको आन्दोलनले पूर्णता पाउनु असम्भव बन्दै गएको भन्न थालेका छन । तिब्बत मामिलामा अमेरिकी रणनीति बुझेका दलाई लामा तिब्बती शरणर्थीको भविष्य कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा चिन्तित देखिन्छन् ।
भविष्यमा चीन–अमेरिका बीच बढ्दै जाने शक्ति संघर्षमा सबैभन्दा बिचल्ली तिब्बतीहरुको हुने भन्दै उनी चिन्तित छन् । एकातिर सामरिक र आर्थिक शक्तिका रुपमा चीन झनझन शक्तिशाली बन्दै जानु अर्कातिर आफू जीवनको उत्तराद्र्धतिर पुग्नुले उनको चिन्ता अझ थपिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अमेरिका, युरोप र भारतको सहयोगले तिबब्ती स्वतन्त्रता हासिल नहुने निष्कर्षसँगै लामाले आफ्नो जीवनकालमै तिब्बती संघर्षलाई सकुशल अवतरण गराएर तिब्बतीको भविष्य सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ । कथंकदाचित दलाईको जीवनकालमै तिब्बती शरणार्थी समस्याको सुरक्षित निकास निस्कन सकेन भने उनीहरुको भविष्य अनिश्चित अन्धकारतर्फ धकेलिने छ । यही कोणबाट दलाईको चिन्ता आएको आकलन गर्न सकिन्छ ।
उनी तिब्बती शरणर्थीको सवाललाई एक कदम पछाडि हटेर भएपनि सुरक्षित अवतरण गराउने पक्षमा लागेको छनक मिल्छ । दलाईका पछिल्ला यी अभिव्यक्ति र चीनप्रति उनको नरम हुँदै गएको व्यबहारबाट भारत, अमेरिका र पश्चिमाहरू भने सशंकित बनेका छन् । लामाका अनुयायीहरुलाई नै लामा बिरुद्ध प्रयोग गर्दैछन् । पछिल्ला दिनमा लामाले उनीहरुको अपमान र असहयोग झेल्दै आएका छन् ।
भारतीय चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा लामाले आफूले स्वतन्त्र तिब्बतको दावी छाडेको बताएका छन् । उनी भन्छन– ‘बितेको कुरा बितिसक्यो । हामीले भबिष्य हेर्नुपर्छ । तिब्बतीहरु चीनसँग मिलेर बस्न चाहन्छन ।’ चीनसँग मिलेर जाने कुरामा जोड दिँदै स्पष्ट शब्दमा लामा भन्छन्– ‘तिब्बतको स्वतन्त्रता अब हाम्रो चाहना रहेन । हामी चीनसँग मिलेर बस्न चाहन्छौं । हामीलाई अब धेरैभन्दा धेरै बिकास चाहिएको छ ।’
बिगतमा तिब्बतको स्वतन्त्रताको नाममा पश्चिमाबाट प्रयोग भएपनि अनुभवी र पाका धार्मिक नेता दलाईले अमेरिकी तथा पश्चिमा रणनीति प्रष्टसँग बुझेका छन् । लामाका अभिव्यक्तिहरुले त्यसैको संकेत गर्छ । दलाईको माथिका अभिब्यक्तिपछि युरोप भ्रमणका क्रममा उनीमाथि दुर्ब्यवहार समेत भएको छ ।
गत बर्ष तिब्बती निर्वासित सरकारको बार्षिक कार्यक्रममा भाग लिन जानबाट आफ्ना नेता र कर्मचारीलाई रोक्न भारत सरकारले उर्दी नै जारी गरेको थियो ।’ धर्मशाला लगायत संसारभर रहेका तिब्बतीहरुमा फुट ल्याउने प्रयास भइरहेका छन् । दलाईकै बिरुद्दमा तिब्बती शरणार्थीलाई गोलबद्ध पार्ने प्रयास भइरहेको छ ।
यी कुरा बुझेरै दलाईले तिब्बतीको भविष्य सुरक्षित गर्न चीनसँग मित्रताको हात बढाउन प्रयास गरेको बुझ्न सकिन्छ । दलाई चीनसँग नजिकिन खोज्दैछन् । यसको साइड इफेक्ट नेपाललाई पर्न सक्छ । चीनलाई तिब्बत प्रकरणबाट समस्यामा पार्न नसकिने हुँदै गएपछि अर्को कुनै कार्ड प्रयोग गर्नेछन् । त्यस्तो कार्डका रुपमा नेपाललाई धेरै पहिलेदेखि उनीहरुले विकसित गर्न प्रयास गर्दै अ‌ाएका छन् । तिब्बती शरणर्थी प्रकरणको विकल्पमा नेपाललाई अझ धेरै प्रयोग गरिन सक्छ । त्यसैले नेपालमा आगामी दिनमा जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय मुद्दालाई अझै पेचिलो बनाइन सक्छ ।
त्यसो त पछिल्लो समयमा अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा चीनको बढ्दो हैसियतसँगै विरोधी शक्तिहरुले ‘तिब्बत कार्ड’ खेलाउन गाह्रो हुँदै गएको छ । त्यसैले तिब्बती समस्यालाई जीवित राखिरहन चीन बिरोधी शक्तिहरुले अन्य विकल्प खोज्नेछन् । चीन शक्तिशाली बन्दै गएको अवस्थामा पनि विभिन्न कारणले चीनको अन्तराष्ट्रिय छवी त्यति धेरै सकारात्मक छैन । त्यसमा पश्चिमाले उठाउँदै आएको मानवअधिकारको विषयले भूमिका खेलेको छ । तिब्बत मामिलामा पनि यो बिषय जोडिएर आउने गरेको छ ।
तर, अन्तराष्ट्रिय समुदायमा दलाईको छवी भने राम्रो मानिन्छ । लामा तिब्बती धर्म र संस्कृतिको प्रतिक हुन् । आस्थाको केन्द्र हुन् । उनी नोबेल शान्ति पुरस्कार बिजेता हुन् । चीन दलाई लामाको त्यो छवी धुमिल बनाएर मात्र लामालाई चीन प्रवेश गराउने पक्षमा देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर तिब्बती बुद्दिजममा पर्न सक्छ । त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि हुनेछ । यस कुरालाइ पनि पश्चिमा शक्तिहरुले उठाउने र अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा चीनलाई अफ्ठ्यारो पार्ने, तिब्बतीलाई उचाल्ने भड्काउने काम गर्न सक्छन । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्न सक्छ ।
त्यसका लागि स्वतन्‍त्र तिब्बत गतिविधिका पक्षधरहरुलाई दलाई बिरुद्द भड्काइने सम्भावना बढ्दो छ । यसमा नेपाल सचेत हुनुपर्छ । चीन बिरुद्द कुनै पनि गतिविधि नेपालले अ‍ाफ्नाे भूमिमा हुन दिन हुँदैन । चीनको तिब्बत समस्या समाधान हुनु नेपालका लागि खुसीको कुरा हो । नेपालको हितमा रहन्छ । नेपालले सजगतापूर्वक तिब्बती मामिलालाई हल गर्न सहयोग दिनुपर्छ । यस मामिलामा नेपालले सहयोग गर्दै गर्दा नेपाललाई त्यसका साइड इफेक्ट देखिन सक्छ । त्यसका लागि चीनसँग नेपालले स्पष्ट कुरा राखेर रणनीतिक रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । सीमा जोडिएको छिमेकीका समस्या समाधान हुनु भनेको नेपालको लागि खुसीको कुरा हो ।
केपी ओलीले रक्षा गरेको चन्द्रसूर्य झण्डा
नेपाली जहाँ, चन्द्रसूर्य अंकित झण्डा त्यहाँ
देशकै अद्यावधिक इतिहास लेखिनुपर्छ– प्रम ओली
चीन विरुद्धकाे गेमप्लानले पीडित छ नेपाल
३० भदौ, २०७६
मैले देखेको अष्ट्रेलिया
आलोपालोकोे कुरा पार्टीभित्र छैन – मन्त्री भट्टराई